ASUS na-egosi ZenFone AR na Google Tango | Akụkọ akụrụngwa
Lenovo nyere malite egbe egbe na Lenovo Phab 2 Pro n'ihi na ihe Project Tango bụ na ekwentị nwere ike ịnwe eziokwu dịwanye elu n'ihu onye ọrụ Site na ihuenyo gị na ihe mmetụta niile ahụ nwere ike ịkọpụta ụlọ ị nọ n'oge ahụ.
ASUS na-awụli elu na bandwagon nke eziokwu nke Project Tango nyere ma na-ewebata anyị na ZenFone AR. Ọnụ nke hụrụ ìhè na CES na Las Vegas na awa ole na ole gara aga na nke ahụ enweghị ọbụna nkọwa dị oke elu dịka ya Nchekwa 8 GB Ram.
ASUS Zenfone AR ezubere iche eziokwu zuru ezu dị nnọọ ka aha ya na-egosi. Ọ na-enye nkwado maka Google Tango na DayDream, Google nke mebere eziokwu n'elu ikpo okwu na anyị ahụbeghị ihe ọ bụla karịa Google Pixel.
N'ime Zenfone AR anyị nwere ike ikwu okwu na ịtụle mgbawa Qualcomm Snapdragon 821 ya na ndị 8 GB nke RAM na-eme ya ezigbo anụ ọhịa aja aja. ya ihuenyo bụ 5,7 sentimita asatọ na mkpebi QHD na teknụzụ SuperAMOLED.
Na foto na-anọchi n'ụzọ pụtara ìhè site n'inwe 3 ese foto; otu n'ime ha bụ 23 MP, ebe ndị ọzọ abụọ na-ahụ maka ijide mmegharị na oghere nke ụlọ ahụ anyị nọ n'ime ya.
Dị ka nkọwa abụọ iji gosipụta, anyị nwere ike ịza ajụjụ banyere gị ụda usoro dabeere na 5 magnetik ọkà okwu na mmiri mmiri jụrụ ya usoro n'ime ala okpomọkụ.
ASUS ZenFone AR nkọwa
5,7-anụ ọhịa Quad HD SuperAMOLED ngosi
Qualcomm Snapdragon 821 mgbawa kụrụ na 2,35 GHz
6/8 GB nke Ram
Ebe nchekwa GB GB
23 megapixel isi igwefoto na abụọ anya m zubere maka Project Tango
Nkwado maka Project Tango na DayDream
Anyị amaghị ego ahụ nke ukwuu dị ka ụbọchị mmalite nke ọnụ, yabụ na ọ nweghị ihe ọzọ ichere maka ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » ASUS weputara ZenFone AR na Project Tango
Asus Zenfone 3 Zoom bụrịrị gọọmentị na ọ gaghị ahapụ gị enweghị mmasị